विविध | Nepal's No.1 Co-operative News Portal | Page 2
महिलाहरुको सारथी बन्दै मनहर्वा साना किसान
बारा । २०६० साल पौषमा स्थापना भएको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.मनहर्वा स्थानिय महिलाहरुको सारथीको रुपमा विकास भएको छ । झण्डै १५ करोडको कारोबार गर्ने संस्थाका कुल […]
काठमाडौं बारमा चुनावी चटारो : लोकतन्त्रवादीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । काठमाडौ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनलाई चुनावी चटारोले छोपेको छ । आगामी जेठ २९ गते शनिबार हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि तीनवटा प्यानल मैदानमा उत्रिएका छन् । कानुन […]
पनामा पेपर्समा २८ नेपालीमाथि छानबिन (सुचि सहित)
काठमाडौं । सरकारले पनामा पेपर्स र स्विस बैंक प्रकरणमा मुछिएका नेपाली र तिनका कम्पनीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयको राष्ट्रिय समन्वय समितिअन्तर्गत गठित अनुसन्धान समितिले सार्वजनिक २८ […]
कुन– कुन मन्त्री हटाउला केपी ओलीले ?
काठमाडौं । म शक्ति बस्नेतलाई कारबाही गर्छु । गृहमन्त्रालयबाट कुनै हातमा निकालेरै छाड्छु, ‘अहिले उनीहरु मलाई हटाउनतिर लागेका छन् । फकाउन मान्छे पनि पठाएको पठायै छ, ‘तपाई भारतसँग […]
सहकारीको वार्षिकोत्सवको अवसरमा टि.भी. उपहार
– दिपेन्द्र सुवेदी कुश्मा । पर्वत जिल्लामा अग्रणी रहेको यहाँको एक सहकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यहाँको एक मन्दिरलाई टेलिभिजन प्रदान गरेको छ । सदरमुकाम कुश्मा नगरपालिका–१० […]
सरकार र अभियानको विवादका कारण सहकारी ऐन पारित हुन सकेन : सहकारीमन्त्री केसी
काठमाडौं । उपप्रधान एवंम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारी अभियान र सरकारका विवादका कारण नयाँ सहकारी ऐन पारित हुन नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारबाट […]
ओझेलमा सहकारी पत्रकारिता !
डिल्लीप्रसाद सापकोटा समाचार नपाएको खण्डमा प्रकाशन वा प्रसारण गरेर आपतको अबस्थामा खाली ठाउ भर्ने हिसाबले मात्रै सहकारी समाचार सम्पादकको महत्वमा रहेका छन् । यो तितो यर्थाथ हो । […]
सहकारीलाई वेवास्ता नगर्न दलको सुझाव
बागलुङ । बागलुङमा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समाज रुपान्तरणको जगका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राज्यका सबै निकायको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । ५९ औं राष्ट्रिय […]
‘सांगठनिक भन्दा पनि एजेन्डालाई भोट दिनुपर्छ’
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १३ औँ महाधिवेशनमा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईले केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । देशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लिएर बजगाईले केन्द्रिय सदस्यमा […]
पत्रकार सुरज प्याकुरेल सम्मानित
काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकार सुरज प्याकुरेल ‘एक्यान पत्रकारिता पुरस्कार २०७२’ बाट सम्मानित भएका छन् । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले हरेक बर्ष प्रदान […]
सहकारी मन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीय पद्धति अवज्ञा गरेका कारण उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले दर्ता गरेको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन […]
काठमाडाैं । शान्ती र बिकासका लागि पर्यटन मुख्य नारा सहित युवाहरुको टोली एशिया भ्रमणमा जाने भएको छ । संयुक्त युवा संगठनको आयोजनामा गरिएको एसिया भ्रमण मार्फत नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन […]
जब सहकारी विभागका रजिस्ट्रार अक्मकिए… !
काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्दै आएको सरकारी निकाय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार काशिनाथ मरासिनि पत्रकारको प्रश्नमा वाक्क न ब्याक्क देखिए […]
गोविन्द शर्मा पौडेल सह अध्यक्ष, नेशनल को-अपरेटर्स ‍एलाईन्स नेशनल को-अपरेटर्स ‍एलाईन्स प्रजातान्त्रिक समाजबादमा विश्वास राख्ने सहकारीकर्मीहरूको साझा संगठन हो । नेपालको सहकारी आन्दोलनका अग्रज दिपक प्रकाश बाँस्कोटाको अगुवाईमा एलाईन्स स्थापना भएको […]
पत्रकार अधिकारीलाई सहकारी सम्मान
काठमाडौं । कान्तिपुर टेलीभिजनका पत्रकार विजयराज अधिकारी सम्मानित भएका छन् । उपलब्धि बचत तथा ऋण सहकारीले सातौं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा पत्रकार अधिकारी नगद सहित सम्मानीत भएका हुन् । […]
‘बागमती’ हेर्ने दर्शकलाई उपहार
काठमाडाै‌ं । बहु चर्चित तथा प्रतिच्छित फिल्म ‘बागमती’ अाजबाट रिलिज हुँदैछ । निकै हल्लीखल्ली र प्रचारकासाथ प्रदर्शनमा आउन लागेको यो फिल्मले सोलो रिलिजको अबसर पाउनु पनि अर्को पाटोबाट […]
हमाल र शिवको एक स्वर ’बागमती’ दमदार
काठमाडाैं । अभिनेता राजेश हमाल र शिव श्रेष्ठले बर्षौपछि सँगै काम गरेको फिल्म हो, ’बागमती’ । यही शुक्रबारबाट रिलिजको क्रममा रहेको साउथ ईण्डियन निर्देशकको यो फिल्मप्रति दर्शकदिर्घामा त […]